Izindaba - Umehluko wokuvikelwa kwemvelo isitshalo esikhulu sokuxuba
Umehluko wokuvikelwa kwemvelo isitshalo esikhulu sokuxuba
Umehluko wesivikelo semvelo esikhulu sokuxuba
Ngenqubekela phambili yomphakathi nentuthuko yesayensi nobuchwepheshe, izingqinamba zokuvikelwa kwemvelo zihehe ukunakwa okuningi. Ngemuva kweminyaka yokusebenza kanzima, isitshalo sokuxuba esisebenza kahle emvelweni sesithole imiphumela yokuqala, futhi izici zaso ezithile zimi kanje:
1. Ukulawula ukuqeda imithombo yokungcola
Control Ulawulo lothuli. Isitshalo sokuxuba esisebenza ngobungani bemvelo sisebenzisa umqoqi wothuli ofanayo ukuze uqedele ukuqoqwa kothuli ngokuzenzakalela, bese ufaka ngokuzenzakalela uthuli oluqoqiwe ohlelweni lokukhiqiza lokusetshenziswa kwamamitha, kunciphisa ukungcola kothuli kwesibili; amadivayisi okufafaza amisiwe esihlabathini nasamagcekeni egceke ukunciphisa ukusebenza kwesihlabathi nohlalu. Uthuli.
Ukwelashwa kwamanzi ahlanzekile. Lesi sitshalo sokuxuba esisebenza ngobungcweti esinemvelo sihlanganiswe nesihlukanisi samatshe esigaxa nohlelo lokusebenzisa kabusha amanzi oludaka. Amanzi angcolile kanye nensalela kadoti eyenziwe ngokusebenza kwesiteshi sokuxuba ihlukaniswe nesihlabathi kanye nohlalu ngemuva kwesihlukanisi senhlabathi. Faka kabusha uhlelo lwamanzi okukhiqiza ukufeza zero ukukhishwa kwamanzi angcolile kanye nensalela kadoti.
Ukulawulwa komsindo. Lesi sitshalo sokuxuba esisebenzisa imvelo esikhulu esisebenzisa imvelo sisebenzisa uhlelo olufanayo lokufaka amatshe amatshe ukunciphisa amandla wezimoto nomsindo; sonke isiteshi sisebenzisa uhlelo lwemoto olunomsindo omncane ukunciphisa umthelela womsindo emvelweni. Imishini yokudlidliza nezinye izinto zixhunywe namaphakethe okudlidliza ukunciphisa umsindo we-Vibration.
2. Sika umzila wokudlulisa
Indlela ephumelela kunazo zonke yokuthi izitshalo zokuxuba ezinkulu ezisebenzisela imvelo ukunqanda ukudluliswa kokungcola ukufaka isiteshi sonke. I-encapsulation ihlukanisa kahle umthombo wokungcola endaweni ezungezile futhi ilawula ukungcola endaweni elinganiselwe, ngaleyo ndlela kuncishiswe umthelela emvelweni.
Ubuhle buyisidingo esiyisisekelo sesitshalo sokuxuba esisebenzisa imvelo ngokukhululekile. Ngokufingqa, kungashiwo ukuthi isitshalo sokuxuba esilungele imvelo siyimboni yesimanje ehlanganisa ngokuphelele ubuchwepheshe bokuxuba, ubuchwepheshe bokuvikela imvelo nobuciko bokwakha. Ukwakheka kwaso sonke lesi siteshi kunomqondo wobuhle, kuyahambisana nendawo ezungezile, futhi ukuhlela kunengqondo.
Ngokufingqa, isitshalo sokuxuba esisebenza ngobungani bemvelo sinezinzuzo eziphelele futhi sihlukile. U-Changli uzibophezele ocwaningweni nasekuthuthukisweni kwezitshalo ezintsha ezinkulu zokuxuba iminyaka eminingi, ethatha ukuvikelwa kwemvelo njengomsebenzi wakhe, futhi uzuze imiphumela. Uma udinga ukubonisana nokuthenga,
Izingxenye Zokukhonkolo Ezihlanganisiwe, Isistimu Yokuqoqa Okuhlanganisiwe, Okuzenzakalelayo Aggregate Batching System, Okuzenzakalelayo Isilinganiso Batching Machine, I-Automaticaggregate Batching Umanyolo Wokuxuba, Isistimu Yokulinganisa Yokuhlanganisa Okuhlanganisiwe,